Mifanindran-dalana amin'ireo faritra: Arzantina, San Nicolas, Balvanera, Almagro, Villa Crespo, Chakarita
Lotra: avy amin'i Avenida Eduardo Madero ho an'i Avenida Federico Lacrosse
Iray amin'ireo lalana mahaliana indrindra ao Buenos Aires i Avenida Corrientes. Ao an-dalantsa dia misy teatra sy bara maro izay nahatonga azy io ho ivon'ny fiainan'ny alina ao an-drenivohitra Arzantina.
Miresaka momba ny tantaran'ilay làlana
Ny anaran'ny arabe dia mifandraika amin'ny tanànan'i Corrientes , malaza nandritra ny Revolisiona Mey. Tamin'ny voalohany, Avenida Corrientes dia làlana kely, fa ny fiparitahana maneran-tany tamin'ny taona 1931-1936. no nanao ny fanitsiana ny endriny ivelany.
Ny fiovan'ny farany an'i Avenida Corrientes dia nitranga tamin'ny taona 2003 hatramin'ny 2005. Ny sakan'ny làlana dia nitombo avo efatra ka hatramin'ny 5 m, ankoatra izay, nanampy trotraka ny hetsika fanampiny noho ny famongorana ireo trano fandefasana telefaona efa tranainy. Ny tetikasa dia nandany ny tetibolan'ny tanàna tamin'ny pesos 7,5 tapitrisa.
Inona no miandry ny mpizaha tany?
Androany, niova ny làlana. Ny ampahany aminy dia ao amin'ny distrikan'ny orinasa any Buenos Aires ary feno toeram-pialam-boly samihafa: cafes, pizza, bibliothèques, art exhibitions. Ny iray hafa dia feno orinasa ara-barotra: sekoly, fikambanana dihy, biraon'ny orinasa lehibe.
Fahitana eny an-dalambe
Ao amin'ny Avenida Corrientes dia afaka mahita ireo toerana malaza ao an-tanàna ianao:
Ny marika fototra ao Buenos Aires - ilay Obelisk natokana ho an'ireo mpiady mpiady ho an'ny fahaleovantenan'i Arzantina, dia mihaona eo ambonin'ny làlana;
Politeama Argentino, Apollo, Odeon, teatra ao an-tanàna.
ny toeram-pivarotana dia miaro ny fizarana voalohany amin'ny làlambe voalohany , izay, tamin'ny faran'ny taonjato faha-19, nisy fiara mitondra ny anarana hoe "Fahafatesana";
eo akaikin'ny fasan'ny lehibe indrindra ao amin'ny fanjakana - La Chacarita .
Hatramin'ny taona 2007, Avenida Corrientes dia manolotra ny "Night of Libraries". Ny hetsika dia mahasarika mpamaky marobe, izay toerana misy ny fanazavana, misy baraingo, toeram-pivoriana malalaka sy seza ho an'ny famakiana dia napetraka eny an-dalambe.
Tsy sarotra ny hahatongavana amin'ny iray amin'ireo lalana malaza indrindra any Buenos Aires. Any akaikin'io dia misy seranana metro maro: Leandro N. Alem, Callao, Dorrego, sns. Eo amin'ny arabe dia misy fiara fitateram-bahoaka №№ 6, 47, 99, 123, 184.
Ny ankamaroan'ny orinasa any Avenida Corrientes dia mivoha manodidina ny famantaranandro, ary afaka mitsidika ny arabe ianao amin'ny fotoana mety aminao.
Ahoana ny fomba fanasana amin'ny palma amin'ny volom-borona?
Myoma avy amin'ny tranonjaza - ny halehiben'ny asa amin'ny milimetatra
Nail - hevitra momba ny lamaody amin'ny vanin-taona fahavaratra
Sakafo miaraka amin'ny gout nandritra ny fiankinan-doha
Aza saro-kenatra: ny sarin'ny kintana malaza indrindra amin'ireo kintana!
Ny maso mitsiriritra Irifrin
Kabinetra ho an'ny lakozia
18 olana mahazatra amin'ny olona izay mijanona ela be
Ahoana no handresena ny fanajana ny mpanara-maso?